ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့ ကောင်းကျိုး (၆) မျိုး
၁. ဆံပင်ကို နက်မှောင်သန်စွမ်းစေတယ်။
Monday, 20 March 2017 13:51
ထောပတ်သီး တစ်နေ့တစ်လုံးစားခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်သော အကျိုးကျေးဇူးများ
ထောပတ်သီးဟာ အရသာရှိပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ထောပတ်သီးကို အသားညှပ်ပေါင်မုန့်မှစပြီး ဟင်းပွဲအမျိုးမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကို ဆက်တိုက်သုံးနေသူများ မျက်စိကို ဘယ်လိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းကြမလဲ???
ကွန်ပျူတာဖြင့် နေစဉ်ရက်ဆက် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေကျရခြင်းကြောင့် မျက်စိ ချွတ်ယွင်း၊ အားနည်းခြင်းတို့ ကာကွယ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကြက်ဟင်းခါးသီးစားခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးများ
ကြက်ဟင်းခါးသီးကတော့ ခါးတဲ့အရသာ ရှိပေမယ့် ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ အသီးတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
Thursday, 16 March 2017 11:18
သံလွင်ဆီအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူး (၇) ချက်
၁. အရေပြားယားယံခြင်းကို သက်သာစေတယ်။
Wednesday, 15 March 2017 10:58
သွားတိုက်ရာတွင် မှားယွင့်လေ့ရှိသော အချက် (၁၀) ချက်
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း သွားတိုက်သော်လည်း ဂရုစိုက်ပြီး စနစ်ကျစွာ မတိုက်ပါက သွားပိုးစားခြင်း၊ သွားဖုံးရောဂါ ဖြစ်ခြင်း တို့ကို ကြုံရတတ်ပါသည်။
၀က်ခြံပေါက်နေသူများအတွက် သက်သာပျောက်ကင်းစေယ့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းများ
မျက်နှာပေါ်တွင် ဝက်ခြံပေါက်လာပြီဆိုလျှင် အမြန်ပျောက်ကင်းစေဖို့ နည်းအမျိုးမျိုးကို ကုသကြပါတယ်။ အမျိုး သားတွေ အသက် ၄၀ ကျော်ရင် ၁ ရာခိုင်နှုန်းသာ ဝက်ခြံထွက်ပေမယ့် အမျိုးသမီး တွေမှာတော့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ဝက်ခြံပြဿနာ ရှိနေပါတယ်။
မိတ်ကပ်မလိုဘဲ လှပအောင် လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
အပြင်သွားခါနီးတိုင်း မိတ်ကပ်တွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး လိမ်းရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် မိမိစိတ်ဟာလည်း မိတ်ကပ်မလိမ်းရင် မလှဘူးလို့ တွေးတော မိနေတတ်ပါတယ်။
မုန်လာဥနီ စားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်များ
၁. မုန်လာဥနီ မှာ ကယ်လိုရီဓာတ်အနည်းငယ်သာပါဝင်တဲ့အတွက် ဝတဲ့လူတွေ နေ့စဉ်စားသုံးပေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေပါတယ်။
(Manufacturers & Distributors)
(X-Ray & Ultrasound)